Waa maxay Trenbolone. Saamaynta xun ee jidhka | Ragga Stylish
Adduunyada jimicsiga iyo jir-dhiska waxaa jira "toobiyeyaal badan" oo loogu talagalay kuwa aan awoodin inay si adag ugu shaqeeyaan ujeeddada jireed ee ay isku dayayaan inay gaaraan. Dadka doonaya natiijooyinka degdegga ah oo ay ka boodaan qaybta ugu adag ee geeddi-socodka, waxaa jira daroogo iyo walxo anabolic. Waxyaabahani waxay kor u qaadaan horumarka muuqda ee dhowr arrimood oo ku saabsan jirdhiska, laakiin waxay sidoo kale saameyn xun ku yeelan karaan caafimaadka kuwa iyaga cuna. Maanta waxaan ka hadli doonnaa walaxda isteeroydhiska ee loo isticmaalo dhismaha jirka iyo helitaanka murqaha. Waxay ku saabsan tahay trenbolone.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa waxa loo yaqaan 'trenbolone', waa maxay saameynta ay ku leedahay jirka iyo waxa ay saameyntiisa leedahay.
1 Waa maxay Trenbolone
2 Saamaynta ugu weyn ee jirka
3 Dhinacyo togan
4 Waxyeelada Trenbolone
Waa maxay Trenbolone
Waa walax isteeroydhis ah oo loo isticmaalo jir-dhiska iyo cayaaraha kale si loo kordhiyo waxqabadka. Mid ka mid ah magacyada ganacsiga ugu caansan maadadan waa Parabolan iyo Trenbol. Waxaa asal ahaan loo abuuray si loo naaxiyo lo'da oo loogu talagalay inay dadku cunaan. Sidan oo kale, faa'iido sare ayaa laga helay ganacsiga hilibka lo'da. Wax la mid ah ayaa ku dhacay clenbuterol.
Maadadan waxaa laga soosaaray nort testosterone. Waxay iska shabahaan waxyaabo kale oo sidoo kale loo abuuray inay ku naaxiyaan lo'da. Waqtigaan la joogo, labadaba cunistiisa dadka iyo xoolahaba gebi ahaanba waa mamnuuc. Si kastaba ha noqotee, suuqa madow, maaddadan wali waxaa si sharci darro ah loogu iibinayaa dhammaan dadkaas doonaya inay xoog ku yeeshaan qolka jimicsiga iyaga oo aan dadaal badan lahayn. J) Haa, Waxay helayaan jidh qurux badan waqti yar gudahood oo ay adag tahay in wax allabaryo la bixiyo. Waxay la mid tahay haddii aan dooneyno inaan ku tartano dalxiis baaskiil baaskiil koronto ku shaqeeya.
Waxaan ka heli trenbolone qaab saddex alaab, inta badan:
Trenbolone Hexahydroxybenzylcarbonate, kani waa kan caanka ah Parabolan waxayna leedahay nolol barkeed ka dheer acetate iyo enanthate.
Trenbolone waxay ka caawisaa sidii loo gaari lahaa faa'iido muuqata oo muruq tayo sare leh iyada oo aan loo baahnayn in dheecaano la haysto sababtoo ah kororka karbohaydraytyada ku jira cuntada. Markuu qofku doonayo inuu si dabiici ah u kordhiyo murqaha, waa inuu cunaa qadar badan oo kaarbohaydraytyo ah si had iyo jeer u haysto dukaamada glycogen muruqa ugu badnaan. Sidan oo kale, natiijooyin wanaagsan ayaa lagu gaaraa tababarka. Si kastaba ha noqotee, wax aan la tixgelin ayaa ah, Si jidhku u milmo 1 garaam oo ah karbohaydraytyada, wuxuu u baahan yahay inuu ku daro 4-5 garaam oo biyo ah jidhka. Tani waa sababta ay dareerayaasha ugu hayaan jirka.
Saamaynta ugu weyn ee jirka
Sidii aan ku soo sheegnay bilowgii, waxaa jira dad doonaya inay ku guuleystaan ​​natiijooyin dhakhso leh dadaal yar. Waxa inta badan dadka ku cusub adduunkan jimicsiga aysan ogayn ayaa ah in natiijooyinka wanaagsan ay aad u gaabiyaan. Si gaabis ah, taasi mararka qaarkood xitaa ma ogaanaysid inaad horumar sameyneyso. Kaliya adoo qaadanaya cabbiraadaha jirka iyo tixgalinta kahor iyo kadib sawirro la mid ah, waxaad isbarbar dhigi kartaa faa iidada weyn ee muruqa. Markaad aragto sida aad uhesho murqaha waxay la mid tahay inaad ku fadhiisato barxada guriga oo aad daawato dharkaaga oo qallalan.
Daawada 'trenbolone' waxaad kuheli kartaa muruq tayo leh adigoon dheecaanka jirka haynin. Waxaa loo adeegsadaa heerarka mugga iyo qeexidda labadaba. Dad badani waxay u isticmaalaan marxaladooda dufanka luminta ee cuntadoodu tahay hypocaloric iyo maaddo borotiin sare leh si loo wanaajiyo ilaalinta murqaha.
In kasta oo aan ka hadlayno waxyaabaha mamnuuca ah iyo kuwa sharci darrada ah ee khataraha caafimaad qaarkood keena, haddana ma dafiri doonno inay leeyihiin saameyn togan. Midka hore waa faa iido nadiif ah oo dhaqso badan oo murqo leh. Waa anabolis wanaagsan. Faa'iidada ay dad badani u adeegsadaan waa sababta oo ah faa'iidadan ayaa la ilaaliyaa. Waxay kaa caawineysaa inaad dhisto xoog iyo inaad si muuqata u hagaajiso soo kabashada inta udhaxeysa tababar kasta.
Ilaa aad dhaafto qiyaasta usbuuclaha ah, ma soo bandhigeyso wax dhibaato ah oo dhadhamin ah. Waa mid ka mid ah walxaha ugu wanaagsan ee dhiska jira ee maanta jira. Habka loo maareeyo waa cirbad oo waxay leedahay nolol aad u gaaban. Tani waa sababta ay tahay in loo mudo ugu yaraan saddex jeer usbuucii. Wadarta qiyaasta toddobaadlaha badanaa waa inta u dhexeysa 200 iyo 600 mg.
Maaddaama ay tahay mid ka baxsan jirka oo aan si dabiici ah loo soo saarin sida ay tahay kiiska waxyaabo badan oo dheeri ah, haddii aad dhaafto qiyaasta toddobaadlaha ah, waxyeelooyin badan ayaa u muuqda inay muuqdaan.
Halkan waxaa ku yaal qodobka lagu xisaabtamayo kuwa go'aansanaya inay bilaabaan baaskiil wadista. Haddii trenbolone aan lagu qaadan qaadasho wanaagsan ama aadan si fiican u soo dhaweynin noocyada maaddooyinkaan, waxaa jira waxyeelo caafimaad. Waxa ugu horreeya waa inay soo bandhigto sumoobid beerka iyo kelyaha ah. Qof kasta oo qaba kalyo xanuun ama dhibaatooyin la mid ah waa inuusan isticmaalin. Haddii muddo dheer la isticmaalo, waxay sababi kartaa qanjirka 'prostatic hyperplasia' (tan macnaheedu waa qanjirka 'prostate').
Dad badan waxaa saameeya kororka dagaalka, cadaadiska dhiigga, iwm. Markaa badanaa waxay la il daran yihiin madax xanuun daran. Saamaynta kale ee badan ee caanka ah ee la xidhiidha walxaha anabolic waa finanka, hurdo la’aanta, dardargelinta hababka alopecic, iyo waxyeelo badan oo taban. Haddii qaadashadu aad u sarreyso oo aan si fiican loo ixtiraamin, waxay u horseedi kartaa dhalanteed iyo ginecomastia.
Looma baahna in lagugula taliyo in lagu sameeyo meertada halbeeggan maadadan tan iyo markii ay keento cillad kacsi, waxay horjoogsataa soosaarka dabiiciga ah ee testosterone waxayna xoojisaa saameynta kale ee xun ee beerka iyo aromatization.
Saamaynta kale ee taban ee jidhka waa:
Kordhinta dhiiranaanta xoogga, garaaca wadnaha, iyo cadaadiska dhiigga.
Kordhinta rabitaanka galmada.
Neefsasho culus (dareemid neef yar).
Heerkulka jirka oo sareeya iyo dhididka habeenkii.
Soo saarida kaadi midab madow.
Hurdo la’aan iyo riyooyin xun xun.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan uu kaa caawinayo inaad waxbadan ka ogaato trenbolone oo aad ka fikirto marka hore taas oo ahmiyada koowaad kuu siineysa, caafimaadkaaga ama jirkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Fitness » Trenbolone
Waxaan u arkaa inay tahay wax qosol badan dadkaas aan awoodin inay si adag u shaqeeyaan, farsamooyinka jimicsiga jirdhiska ayaan macquul aheyn in la gaaro, waxaan ku celinayaa, macquul maahan in lala gaaro haddii aysan aheyn isticmaalka steroids, waad u shaqeyn kartaa sidii adigu oo kale rabto, ma aha su'aal shaqo.
Jawaab ku samee Joaquin Phoenix
Waxaa jira tixraacyo fayo badan oo dabiici ah sida Eneko Baz, Sergio M. Coach, Vadym Cavalera, Angel7Real iyo dheer iwm. Fikradda ah in sannado iyo sannado dadaal iyo hufnaan la geliyo waa wax dad badani la qabsadaan. Intooda badani waxay maraan habka "fudud".
Duda ayaa markaa lagu qaadaa 3 usbuucii qiyaas yar oo ah 200ml midkiiba, sidaasna ku gaarto 600ml usbuucii.
Ku jawaab Jeremin Espinoza herrera
Hambalyo, markaan daacad noqdo, qoraalkani waa mid wargelin ah. Anigu ma ihi khabiir ku takhasusay cilmiga dawooyinka sidaa darteed kuuma jawaabi karo. Haa, waxaan kuu sheegi karaa inaan ahay tababare shakhsi ahaaneed iyo nafaqeeye isboorti waxaanan tababaro dabiiciga dabiiciga ah oo leh natiijooyin wanaagsan. Haddii aad rabto macluumaad ku saabsan la taliyayaashayda, email iigu soo dir german-entrena@hotmail.com ama toos toos ugu ah sawirka @german_entrena.
Hadday waxtar leedahay inkasta oo ay ku jirto qiyaasta, waa uun ku filan tahay, laga yaabee # 30mg 3 jeer usbuucii oo lagu daray kuwa xannibaya; dutasteride; telmisartan (sidoo kale waxay kicisaa cadaadiska dhiigga) iyo cabergoline ama pramipexole oo loogu talagalay sare u qaadista prolactin, si ku habboon aromatase in kastoo tamoxi badbaadiyo, maxaa yeelay waa inay weli la socotaa testo, ugu fiicnaan aan ka badnayn laba toddobaad, inta kale waa inay halista
Subax wanaagsan. Ma ii sheegi kartaa waxa meertada mootada ah loola jeedo? Codsigaagu ma yahay mid aan isku darin alaabooyin kale mise wuxuu tixraacayaa wax kale? Waad ku mahadsantahay horay
Haye, kuguma talinayo inaad isticmaasho walxaha daroogada gabi ahaanba. Waxaad kuheli kartaa natiijooyin aad uwanaagsan adigoo dabiici ah. Anigu waxaan ahay tababare shakhsi ahaaneed iyo nafaqeeye isboorti. Hadaad ubaahantahay macluumaad ama talo iimayl iigu soo dir german-entrena@hotmail.com ama toos ugu socota instagram profile @german_entrena
Waxaan u arkaa steroids shaqo, taasi waa, haddii aad shaqo laheyd oo aad waxbadan ka shaqeyso laakiin lacag yar ayey ku siinayaan guddiyaduna waa yar yihiin haba u badnaadaan intaad iibiso, waxay ku socotaa meel aad u sarreysa oo aan loo baahnayn.
Kadib waxaa jira steroids meesha aad ka shaqeyso waxyar oo aad kasbato wax badan, ok ma waxaad dooneysaa inaad ku faanto oo aad hoos u dhigto kan shaqadaas ku leh mushaarka ugu fiican ???, Perfect !!! Laakiin saaxiibkeyga qaaliga ah ee qaaliga ah, shaqada aan ugu yeero steroids, haddii aad u guntato sida tan dabiiciga ah, weli waad guuleysan doontaa laakiin illaa hadda, isbarbardhig ma jiro !!!.
Waxaan doorbidayaa shaqadaas oo aad kasbato waxbadan, waxaad sameysaa xoogaa ama dadaal badan iyo dhankeyga tan iyo markii aan qatar uyahay isticmaalkeeda, maxaa yeelay waxaan siiyaa wax walba, sida ugufiican, dadaalkayga ugu fiican si milligram kasta uu uguqalmo waa
Ku jawaab Walex Polanco
Haha "toobiye", "dadka aan awood u lahayn in ay si adag u shaqeeyaan" hahak haa ... u sheeg Coleman, Phil Heath, Dorian Yates ama qof kasta oo jidh dhis sameeya oo ka mid ah kuwa ugu sarreeya ugana sii dheeraado kuwa ugu caansan; tartanka oo aan intaa ka badnayn. Dadka inta badan noloshooda ku qaatay tababaro adag oo lagu edbiyo cuntada iyo jimicsigooda taas
Hab fudud. Haa, waxaa jira dad rumeysan in kiimikada ay wax walba qaban karto, laakiin taasi ma shaqeynayso haddii aadan lahayn anshax shaqo oo aadan tababar bixin illaa aad matagayso ama aad ku ooyneyso… waa wax aad u fudud in la yiraahdo tani waa baaskiil wadid Laakiin baaskiil wadista ay ku dhacday tababarka waxa aan qorneyn. Hadana haddii aad u maleyneyso inay tahay habka ugu fudud, waa sababta oo ah waligaa tababar adag ma sameyn, wax intaa ka yarna ma arag tareen dhab dhise. Waxa kale waa chuloplaya ...